စက်ရုပ်အတွက် ကြီးမားသော အချင်း လေးမှတ် အဆက်အသွယ် ဘောလုံး
1.Single Row Four Point Contact Ball Slewing Bearings။
5.Thin Section Slewing bearings(အလင်းအမျိုးအစား)။
6.Thin Section Slewing Bearings (Flange အမျိုးအစား)၊
လေအားလျှပ်စစ်၊ ရေကြောင်းကရိန်း၊ ကမ်းလွန်ကရိန်း၊ ဆိပ်ကမ်းမိုဘိုင်းကရိန်း၊ ချားရိန်း၊ ပုံးတင်စက်၊ ဆောက်လုပ်ရေးစက်ယန္တရား၊ လှေခါးပိုက်တပ်၊ ဒိုင်းလွှားစက်၊ ရေဒါ စသည်ဖြင့်
1. ကျွန်ုပ်တို့သည် အရွယ်အစားအမျိုးမျိုး slewing လက်စွပ်ဝက်ဝံများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
2. အမျိုးအစား- သွားများ၊ အတွင်းသွားများ၊ ပြင်ပသွားများ
3. အချင်းအတိုင်းအတာ- 200mm-----4500mm၊ အလေးချိန်အကွာအဝေး- 20kg--------5100kg
4. ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အရ OEM bearing ကိုဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်။
5. အရည်အသွေးမြင့် bearing၊ ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်း၊ ချက်ခြင်းပေးပို့ခြင်းနှင့် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများ။
ISO9001 2008၊ SGS၊ CCS
ကုန်ကြမ်း 50Mn၊ 42CrMo
ပြေးလမ်း တင်းမာခြင်း။ 55-62HRC
- ကြိုတင်ထည့်သွင်းခြင်းမပြုဘဲ ဤလျှောကွင်းများသည် အလွန်လိုအပ်သော လည်ပတ်မှုအောက်တွင် ခိုင်မာပြီး သက်သေပြပါသည်။၎င်းတို့သည် ကပ်လျက်တည်ဆောက်မှု၏ ညီညာမှုနှင့် ထောင့်မှန်မှုအပေါ် အနည်းငယ်မျှသာ တောင်းဆိုထားသည်။
- ၎င်းတို့သည် ရိုးရှင်းသောသတ္တုလုပ်ငန်းစက်များ၊ လေအားသုံးကိရိယာများနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းများတွင် တိကျမှုနှင့် ခိုင်မာမှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်နည်းပါးသော လျှောက်လွှာများအတွက် သင့်လျော်သည်။
ကမ္ဘာကျော် ကမ္ဘာကျော် ကမ္ဘာကျော် ရောင်းစျေး Xuzhou Wanda Four Point Contact Ball Turntable Slewing Ring Bearing
Single Row Four Point Contact Ball Slewing Bearingထိုင်ခုံကွင်း2ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းသည် ဒီဇိုင်းပိုင်းကျစ်လစ်သိပ်သည်းကာ အလေးချိန်ပေါ့ပါးပါသည်။ ဘောလုံးများသည် axial force၊ radial force နှင့် ထွက်ပေါ်လာသောအခိုက်အတန့်တို့မှတစ်ဆင့် အချက်လေးချက်ဖြင့် စက်ဝိုင်းပုံပြိုင်ပွဲနှင့် ထိတွေ့သည်။
၎င်းကို slewing conveyer၊ welding arms and positioners၊ light၊ medium duty cranes၊ excavators နှင့် အခြားသော engineering machines များအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ထုတ်ကုန်တွင်ရရှိနိုင်သည်- တစ်တန်းနှင့်နှစ်တန်းဘောလုံး၊ အတန်းသုံးတန်းကြိတ်စက်၊ အလုံပိတ်ကြိတ်စက်နှင့် အလုံပိတ်အတွင်းပိုင်းဂီယာတပ်ထားခြင်း၊ ပြင်ပဂီယာတပ်ထားပြီး ဂီယာမပါသောရှင်းလင်းရေး သို့မဟုတ် ကြိုတင်တင်ထားသည်
--ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးနှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုကို လေးစားပါသည်။
--ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
-- အချိန်မီ အကြောင်းပြန်ပါသည်။ Quotes များကို 24 နာရီမှ 48 နာရီအတွင်း ပြန်ပို့ပေးပါသည်။
ယခင်- XZWD4point angular contact ball turntable slewing bearing
နောက်တစ်ခု: အရည်အသွေးမြင့်စက်ရုပ်လက်မောင်း Slew Drive ကိုအသုံးပြုပါ။
Excavator Turntable Bearing ၊
သွားများလက်စွပ် Slew Bearings
Concrete Mixing Pump Truck အသုံးပြုထားသော Slewing Ring Be...
တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Slewing Bearing Slewing Machine B...
Standard Size Thin Slewing Ring Swing Bearing
Wanda နှစ်တန်းဘောလုံး Slewing Ring Bearing Exte...